के तपाई मोटाउन चाहानुहुन्छ ? यस्तो छ प्राकृतिक उपाय
✍️: टिभी अन्नपूर्ण	 🕒 प्रकाशित: २०७७ चैत्र २९, आईतवार १७:३०
हामी कुरा गर्छौ, कसरी मोटोपन नियन्त्रण गर्ने ? कसरी तौल घटाउने ?
तर, सबैको चिन्ता मोटोपन घटाउने मात्र छैन । कतिपयलाई तौल बढाउनुपर्ने अवस्था पनि छ । वाध्यता पनि । भनिन्छ, तौल घटाउन जति गाह्रो छ, उत्ति नै सजिलो त, तौल बढाउन । तर, भुक्तभोगीहरु यसमा सहमत छैनन् । उनीहरु भनिरहेका हुन्छन्, ‘यसो गर्दा पनि तौल बढेन ।’